Home / အားလုံးအောက်ခြေ
အကွိမျမြားစှာအရောင်များပေါ့ပေါ့ပါးပါး Plus အား Size ကိုမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ
အကွိမျမြားစှာအရောင်များပေါ့ပေါ့ပါးပါး Plus အား Size ကိုမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ $51.00 $60.00
အိတ်နှင့်တူသော Boyfriend မိန်းမဆောင် Jean ဝမ်းခွဲ $62.05 $73.00
ဝါဂွမ်း & ပိတ်ချောပေါ့ပေါ့ပါးပါးအစင်းဘောင်းဘီ
ဝါဂွမ်း & ပိတ်ချောပေါ့ပေါ့ပါးပါးအစင်းဘောင်းဘီ $61.20 $72.00
retro Corduroy ချောင်ဘောင်းဘီ
retro Corduroy ချောင်ဘောင်းဘီ $70.55 $83.00
Beige သပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ
Beige သပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ $57.60 $72.00
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာပေ Roll-up, ဘောင်းဘီရှည်
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာပေ Roll-up, ဘောင်းဘီရှည် $57.60 $72.00
စပျစ်သီးကိုလဲမှို့ပိတ်ချောအစင်းဘောင်းဘီ $57.80 $68.00
Plus အား Size ကို Flowy ပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ
Plus အား Size ကို Flowy ပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ $66.30 $78.00
အဆမတန်ကြီးမားဝမ်းခွဲဒင်ဗာမြို့မှမိန်းမဆောင် Jean $57.60 $72.00
multicolor Tie ဆိုးဆေးမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ
multicolor Tie ဆိုးဆေးမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ $62.90 $74.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Irregular ဖြတ် Maxi အဝတ်
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Irregular ဖြတ် Maxi အဝတ် $61.20 $72.00
ချောင်ပိတ်ချောဘောင်းဘီ $61.20 $72.00
Gypsy Style Black Embroidered Harem Pants ရောင်းကုန်ပြီ
ဝါဂွမ်း & ပိတ်ချော Flowy Palazzo ဘောင်းဘီ
ဝါဂွမ်း & ပိတ်ချော Flowy Palazzo ဘောင်းဘီ မှ $102.85 $149.00
ရောင်စုံစပ်ချုပ်ပညာ Plus အား Size ကိုမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ
ရောင်စုံစပ်ချုပ်ပညာ Plus အား Size ကိုမိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ $51.00 $60.00
retro Printed Corduroy ဘောင်းဘီ
retro Printed Corduroy ဘောင်းဘီ $60.35 $71.00
ကလူခွစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအများစုကပုံမှန်ဂျင်းဘောင်းဘီ, ဘောင်းဘီတိုများနှင့်အဝတ်များထင်ပါတယ်။ Little ကသူတို့အနေဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောပိုပြီးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်သိလား! တွင် Buddhatrends ကျနော်တို့အများအပြားဟာတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးဘူးသောခွအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကထူးခြားတဲ့ကြည့်ချင်လျှင်, အပူဇော်ဖို့ရှိသည်အားလုံးမှတစ်ဆင့်စျေးဝယ်!
သင်တစ်ဦးကြော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်, လမ်းတစ်လမ်း, ပေါ့ပေါ့ကြည့်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မှာအတွက် Lounge မှခွတရံကြည့်ကြလော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုမှတဆင့် scrolling သင်ပြီးပြည့်စုံတစ်စုံကိုရှာဖွေသေချာပါသည်။
ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်ခေတ်မီတဲ့သဘောမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွအေနေ Beige သပိတ်ချော Palazzo ဘောင်းဘီ သင်တို့ကိုယူတစ်ဦးချင်းစီချဲ့မနေတော့နှင့်အတူစီးဆင်းကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံး Palazzo ဘောင်းဘီ offer comfort and style in one, and, are available in different patterns as well asavariety of colours. We suggest them to every woman looking foraunique look that adds poise to their outfit.
ဖက်ရှင်ရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးမှာ မိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကြည့်ဖို့ add ရန်ကစားအေးစတိုင်ကိုဆက်ကပ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စတိုင်မှဖြည့်စွက်ရန်ကြွလာသောအခါသူတို့ပဲရှိရပ်တန့်ကြဘူးသော်လည်း။ သိပ်ပြီးတူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ဤဝတ်, ဒါပေမယ့်သူတို့အားလုံး Buddhatrends လာလျှင်သူတို့ကခုန်ခြင်းနှင့်ယောဂမှာနှစ်ဦးစလုံးဝတ်ဆင်ရန်ပုံစံများနှင့်စတိုင်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေမယ်လို့သူတို့ပူဇော်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကြောင့်မိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီနှင့်ယောဂပရိတ်သတ်များမှရေးဆွဲခံရဖို့လေ့ စတူဒီယို။ ကျွန်တော်တို့၏ Black ကဆင် Printed မိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီ နှင့် အနီရောင်လူမျိုးစု Boho မိန်းမဆောင်ဘောင်းဘီဥပမာ, သူမ၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဦးတည်ထိုမိနျးမအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလိမ့်မည်။
Buddhatrends at ငါတို့သည်လည်းပူဇော် Hippie ဘောင်းဘီ, ကျယ်ပြန့်ခြေထောက်နဲ့ဘောင်းဘီ, ပိတ်ချောဘောင်းဘီ, စပျစ်သီး ဘောင်းဘီရှည်, လည်းပဲ Hipster Jean ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မှတ် Buddhatrends လှည့်ကွက်နှင့်အတူ။
ကျနော်တို့တိုင်းအခါသမယ, ခပ်သိမ်းသောအမြိုးသမီးတဘို့ထဲကနေရွေးချယ်ဖို့ခွ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏အားလုံးအောက်ခြေစုဆောင်းခြင်းမှတဆင့်ရှာဖွေပါလျှင်ငါတို့သည်သင်တို့သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိဘဲစွန့်ခွာနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်အာမခံ!